Abakhiqizi nabathengisi bezingubo zokusebenza zomsebenzi | qiangwei
1. Khetha indwangu ye-polyester / ukotini entofontofo, okungelula ukuyikhipha, ukugqoka, ukumelana nokugqoka futhi ukugezeka, indwangu ethokomele nephefumulayo, ukumuncwa komswakama nokususwa kwezithukuthuku.
2. Umklamo oyingqayizivele we-lapel uqhakambisa ukuthambekela kwemfashini, kanti uziphu wangaphambili we-flap ubushelelezi futhi kulula ukuwugqoka; Umklamo wombala ohlukile wengaphambili langaphandle wenza yonke ingubo ikhanye futhi ikhanye. Amaphakethe amakhulu ezinhlangothini zombili zesifuba, ukuthungwa kwentambo okuvulekile, okuhle nokuphana, okulula ukuphatha zonke izinhlobo zamathuluzi emsebenzini, ukwakheka okulula nokuncane kufaka phakathi zonke izinhlobo zokuma komzimba nokuma komzimba.
3. Isikhwama semikhono yengalo yangakwesobunxele, kulula ukufaka ipeni, elula futhi esebenzayo.
4. Ingubo inemithungo eqinile futhi esondelene, futhi akulula ukugqashula uvule izikhala. Isigaxa nomphetho kulungiswa futhi kuqiniswe ngezinkinobho ezibucayi nezilula, ezilula futhi ezingokoqobo.
5. Uhlangothi olungaphambili lwaleli bhulukwe lufakwe isikhwama sokutsheka, kuthi ohlangothini lwangemuva lukhishwe ukuze kube lula ukugcinwa; I-Crotch ithungiwe, akulula ukudabuka.
6. Lolu hlobo lwezingubo zomsebenzi lungahlangabezana nezidingo zezinhlobo ezahlukene zomsebenzi. Ukudonsa kwe-3D kungasiza ukunwetshwa kombukiso nezidingo zomsebenzi, futhi kwenze abagcini bazizwe bekhululekile ukuhlangabezana nezidingo zazo zonke izizinda zempilo.
7. Sekela izitayela ezenziwe ngezifiso nelogo yenkampani ukuthuthukisa isithombe senkampani.
8. Uma ikhasimende linamasampula, singenza ngokwamasampuli ekhasimende, uma ikhasimende lingenawo amasampula, singakwazi ukuklama ngokuya ngemibono yekhasimende, noma ikhasimende lingakhetha amasampula ethu asefektri.
Ifanele umkhakha olula, umkhakha wokukhiqiza, umkhakha wezokwakha, umkhakha wokuhlobisa, ukuthuthwa kwempahla, ukugcinwa kwezimoto kanye neminye imvelo yezimboni.
Langaphambilini Ingubo yokuhlinza
Olandelayo: Izingubo Zobufakazi Belanga
Izembatho Zangaphandle Zabesilisa
Isitolo Sezingubo Zangaphandle
Izingubo Zemidlalo Zangaphandle